Where is Zawgyi 2009 — MYSTERY ZILLION
Where is Zawgyi 2009
October 2009 edited October 2009 in Open Source
အီး.. ဇော်ဂျီ 2009 ဖောင့်နဲ့ Keyboard တွေ ဒေါင်းဆွဲချင်လို့ google နဲ့ရှာတာ ပထမနဲ့ ဒုတိယ စာမျက်နှာတွေကလင့်တွေ အကုန်ကုန်သွားတာ တောင် 2009 ဖောင့်နဲ့ Key Master ပဲရတယ်.. Keyboard ကိုခုထိမတွေ့ဘူး... MZ မှာ ကိုစေတန်တင်ပေးထားတုန်းက အလကားရရင် ခြေမြန်လက်မြန်ယူတတ်တဲ့ အကျင့်လေးရှိလို့ ဆွဲထားလိုက်တာ အိမ်က ကွန်ပျူတာထဲမှာတော့ အစုံရှိတယ်.. အခု ကိုစေတန့်လင့်တွေလဲ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိဘူး.. တခြားနေရာရောက်လို့ zawgyi 2009 တင်ချင်တိုင်း နက်ပေါ်တက်ရှာရင် ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူး.. zawgyi.net မှာကအစ 2007 ကမတက်သေးဘူး.. ဘာဖြစ်လို့အဲလောက် ရှာရခက်နေတာလဲမသိပါဘူးဗျာ .. zawgyi 2009 ကို ဒီထက်ခပ်မြန်မြန်လေး တွင်ကျယ်စေချင်ပါတယ်.. လောလောဆယ်က ကျွန်တော်တို့က 2009 နဲ့ရိုက်ထားတာတွေကို တခြားသူတွေကို ဒီတိုင်းပေးလိုက်ဖို့ ခက်နေလို့ပါ.. Powerpoint လိုဟာကအစ သူများကိုပေးဖို့ဆို PDF လုပ်ပြီး ပေးနေရတယ်.. လွယ်လွယ်ကူကူရှာတွေ့နိုင်မှ များများကျယ်ပြန့်မယ်ထင်ပါတယ်.. အခုစာတောင် 2009 ရှာမတွေ့လို့ 2007 နဲ့ပဲ ရိုက်လိုက်ရပါတယ်..
Zawgyi 2009 ကို ကျွန်တော့်ဆိုက်တွေမှာ Page တစ်ခု တင်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခွင့် ပေးထားခွင့် ရှိလားမသိဘူး.. ရှိရင် လုပ်လိုက်တော့မယ်
you can search in google with newzawgyi. After that you will find link on the first row.
ကျေးဇူးပါကိုစေတန်.. ကျတော်က "zawgyi 2009 unicode" ဆိုတဲ့ Keyword ကိုသုံးပြီးရှာခဲ့ပါတယ်.. ကျန်တဲ့သူတွေလဲ 2009 ဗားရှင်းလိုချင်ရင် အဲလိုပဲလုပ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်.. keyword ကို newzawgyi လို့စဉ်းစားမိတဲ့သူတော့ သိပ်ရှိမယ်မထင်ဘူးဗျ..
မှာ KeyMaster ရယ်ဖောင့်ရယ်ပဲတွေ့တယ်.. ကိုစေတန် MZ မှာအရင်တင်ခဲ့ဖူးတုန်းကလို့ Zawgyi Style Keyboard, Unocode Style Keyboard တွေ ရှာမတွေ့တော့ဘူး..
ဒါနဲ့ ကျတော့်ဆိုက်တွေမှာ zawgyi ၂၀၀၉ font နဲ့ Keyboard တွေ KeyMaster တွေ ဒေါင်းလုပ်ပေးဆွဲထားလို့ ရမလားဗျ.. planet.com.mm မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို အဲဒီမှာတင်ပဲ ဆွဲချလို့ရတာ တွေ့မိလို့ပါ